इटालियन क्लबमा अनबुन्धपछि रोनाल्डोले कसलाई के भने ? हेर्नुस् – Everest Dainik – News from Nepal
इटालियन क्लबमा अनबुन्धपछि रोनाल्डोले कसलाई के भने ? हेर्नुस्
एजेन्सी । केही दिन अघि इटालियन च्याम्पियन युभेन्टस क्लबमा अनुबन्ध भएका क्रिष्टियानो रोनाल्डोले इुभेन्टसले आफूलाई दिएको अवसरका लागि आभारी रहेको बताएका छन् । बढ्दै गएको उमेरमा पनि आफूलाई विश्वास गरेर अवसर दिएको भन्दै रोनाल्डोले युभेन्टसको प्रशंसा गरेका हुन् । ३३ वर्षका रोनाल्डो रियल मड्रिडबाट ११२ मिलियन युरोमा इटालियन च्याम्पियन युभेन्टसमा अनुबन्धित भएका हुन् ।
आफ्नो उमेरका खेलाडी सामान्यतया कतार वा चीन जाने भए पनि युभेन्टसले विश्वास गरेकोमा आभारी रहेको रोनाल्डोको भनाई छ । ९ वर्ष रियल मड्रिडमा बिताएका रोनाल्डोले यो अवधिमा क्लब तथा व्यक्तिगत स्तरमा पाउनु पर्ने कुनै उपाधि वा अवार्ड बाँकी छैन । तुरिनमा युभेन्टसले उनलाई औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गर्नका लागि गरेको कार्यक्रममा रोनाल्डोले भने, ‘जीवनको यो उमेर करिअरको यो अस्थामा यो क्लब आउन पाउँदा निकै खुशी छु ।’
उनले आफू युभेन्टका लागि ‘लक’ बनेर आउन चाहेको र युभेन्टसलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन चाहेको बताए । रोनाल्डोले रियल मड्रिडबाट कीर्तिमानी ४५० गोल गरे भने चारपटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिते । यस्तै उनले दुई पटक ला लिगाको उपाधि पनि उचाले । उनी सन् २००९ मा म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियल मड्रिड गएका हुन् ।
रोनाल्डोले पाँचपटक बालोन डी’ओर जितेका रोनाल्डोले पोर्चुगललाई सन् २०१६ मा युरोकपको उपाधि दिलाएका थिए । रोनाल्डोले भने, ‘म जित्न चाहन्छु, उत्कृष्ट हुन चाहन्छु, हुन सक्छ फेरि बालोन डी’ओर जित्नेछु, तर सबैकुरा प्राकृतिक रुपमा हुनु पर्छ । म शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रुपमा ठीक थिएँ र यहाँ आइपुगेँ र यसका लागि खुशी छु ।’
ट्याग्स: Crishtiano Ronaldo, इटालियन च्याम्पियन युभेन्टस क्लब